Dib u eegistii 02:08, 18 Febraayo 2021 ee TheWikipedian1250 (Wadahadal | ku darsasho)
Dad (; ) waa wadarta qof. Sidoo kale dad waa tiro badan oo shakhsiyaad ah kuwaasi oo noqon kara qabiil, bulsho, qoomiyad iyo wixii la mid ah. Dunida maanta waxaa ku nool dad ka badan 7 bilyan oo qof; kuwaasi oo ku kala nool qaaradaha dunida. Inkastoo bani aadam la isku yahay, hadana dadka dunida ku nool waxay leeyihiin midabo iyo qaabdhismeed xoogaa kala duwan taasi oo ku xidhan cimilada, deegaanka iyo nolosha shakhsigaas ama dadkaasi. Noocyada kala duwan ee dadka waxaa ka mid ah:
Dadka Madoow - kuwaasi oo ku dhaqan ama asal ahaan ka soo jeeda qaarada Afrika, Ustareliya iyo qeybo ka mid ah qaarada Aasiya.
Dadka Cad - intooda u badan ka soo jeeda qaarada Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfur Ameerika, Ustareliya iyo meelo kale.
Dadka Cowlan (yellow people ama mongoloid people) - asal ahaan ka soo jeeda qaarada Aasiya (gudaha Bariga Aasiya, Koonfur-bari Aasiya, Siberia iyo Aasiyada Dhexe), Waqooyiga Ameerika iyo Koonfur Ameerika, waxaa ka mid ah "Hindida Cas", "Shiinaha" iyo wixii la mid ah.
Arrimaha ugu weyn oo heysata dadka waa shaqo iyo waxbarashada. Dadka lumo marmar waxay uu jeestaan balwad.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dad&oldid=209647"